Ukuzicabangela ngaphambi kokuphinda uhlele kabusha » Martech Zone
Ukuzicabangela ngaphambi kokuphinda uhlele kabusha
NgoMsombuluko, Juni 11, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ungaqaphela ngemuva kokuvakashela isayithi elithile lapho uqala khona ukubona izikhangiso kwenye isayithi ezimayelana nazo ngokwengeziwe. Akuyona into engaqondakali. Amasistimu afana ne-Google Adwords asebenzisa a ikhukhi lomuntu wesithathu lokho kubenza bakwazi ukubona lapho uvakashela isayithi lomkhangisi bese bekulandela lapho uvakashela amanye amasayithi anezikhangiso. Ukubuyisela emuva kabusha kuyimpumelelo futhi kuholela emazingeni aphezulu okuguqulwa ngezindleko eziphansi ngokuchofoza ngakunye. Bheka nge ukhokhe uchwepheshe ngamunye ngokuchofoza uma ungazange ulisebenzise ngokunenzuzo.
Ongase ungakuqapheli, nokho, ukuthi kukhona nezindlela zokukhomba amasayithi abantu abavame ukuwavakashela ngaphambi kokufika kweyakho. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-Pretargeting futhi kuchazwa kule infographic kusuka ku-Pretarget. Ngamanye amagama, uma abantu bevakashela amasayithi athile ngaphambi kokufika kusayithi lakho, udinga nje ukwazi ukuthi yini lawo masayithi futhi ukhangise ngawo.
Tags: infographicqagela phambiliukucabanga kusengaphambilii-retargeting